Dhaxalkii Baaderiyada – Kaasho Maanka
Sida ku xusan taariikhda Waraqat Bin Nawfal wuxuu ahaa nin ka mid ah dadkii deganaa magaalada Makka. Warqat wuxuu ahaa baaderi ku xeel dheer diinta masiixiga una banbaxay cibaado iyo werdi, wuxuuna madax u ahaa koox masiixiyiin ah oo reer Makka ah oo ay ka mid ahayd Khadiija Bintu Khuwaylad oo ay qaraabo ahaayeen, wuxuuna diidanaa ama ka mid ahaa koox diidanayd ilaahnimada Ciise, waana ninka ku cibaadysan jirey godkii loo yiqiin Xiraa (غار حراء).
Warqat Bin Nawfal kama mid ahayn dadkii dhagaxa caabudi jirey ee reer Makka, wuxuu sidoo kale ku xeeldheera afka Cibriga oo ay ku qornaayeen badi kutubta diimaha degaankaa ka jirey taasi waxay u fududaysay inuu tarjumo waxbadana ka ogaado kutub badan oo diimeed kuna qornaa afka Cibriga.
Nebi Maxamed hooyo iyo aabo midna ma lahayn wuxuuna ahaa nin dan yar ah waxayna godka ku wada cibaadaysan jireen Warqat Bin Nawfal, Maxamed wuxuu raaci jirey adeerkii Abu-Daalib waxaana u suurta gashay inuu soo arko dhul badan dad badana la kulmo dadkaas waxa ka mid ah Baaderi kale o la odhan jirey baxiiri (الراهب بحيرى) una sheegay Abu-Daalib in ninkan yari uu leeyahay astaamihii nebinimada sidaa darteedna uu dib u celiyo isagoo sheegay in amnigiisu khatar ku jiro..
Sida muuqata labadan baaderi iyo Abu-Daalib way isla ogaayeen hawsha saddexdoodana lama hayo meel ay ku muslmimeen.
Warqat Bin Nawfal wuxuu rabey oo aad u jeclaa inuu reer Makka ka xoreeyo dhagax caabudka isla markaana u dhiso boqortooyo diimeed, wuxuuna u arkay nebi Maxamed inuu yahay askariga ugu haboon ee shaqadan qaban kara, sidaa darteed ayuu bilaabay inuu tababaro si uu hawsha uga soo baxo cilmigana uga dhaxlo.
Halkaas ayay Maxamed iyo Warqat Bin Nawfal ku bilaabeen inay godka (غار حراء) wada galaan si ay cilmiga ugu kala qaatan qorshayaashana ay u dejiyaan.
Maxamed wuxuu ahaa rajay iyo agoon hantina aan lahayn oo sabool ah sidaa darteed Warqat Bin Nawfal wuxuu Maxamed u geeyey Khadiija Bintu Khuwaylad o ahayd haweenay maal-qabeen ah si uu ugu shaqeeyo dhul badan oo kutubta looga akhriyayna uu indhihiisa ugu soo arko.
Khadiija way ka waynayd da’ ahaan Maxamed hortiina dhowr jeer ayay guursatey. Berigaas dhaqanka reer Makka iyo degaanada Carbeed ee ku xeeran way adkayd in ninku guursado qof dumar ah oo da’ ahaan ka wayn ama carmal ah.
Maxamed wuxuu guursadey Khadiija waxaana u meheriyey wadaadki baadeeriga ahaa Warqat Bin Nawfal meherkuna wuxuu u dhacay habka ay qabto diinta Kiristanku ileen ma jirin wax kale oo la isku mehersadaa aan ka ahayn dhagxaanta ay caabudaan hortooda.
Maxamed haween kale ma guursan intay Khadiijo noolayd Markayse dhimatay xadhkuhuu goostay oo caruur iyo carmalba kama nabad gelin, waxaana u dheeraa dumarka addoomaha ee uu dagaalka ku soo qafaashay, Ilaahiisuna wuxuu soo dejiyay aayad Quraana oo kaligii u bannaynaysa galmada gabadhii isu soo hibaysa meher iyo markhaati la’aan 1.
Maxamed xaaskiisa Khadiija iyo macalinkiisa Warqat waxay si habsami leh u fuliyeen qorshohoodi ahaa asaasida boqortooyo diimeed cusub una dhiganta tan yuhuudda, tallaabadan mid la mid ah waxaa qaadey boqorki Abbaasiiniya Gebre Meskel (1162–1221) kaasoo dhisay Kaniisadaha caanka ah ee ku yaal woqooyiga itoobiya ee loo yaqaan Lalibela kadib markii muslimiintu qabsadeen Jerusalem si ay bedel ugu noqoto magaaladaas cadawgu qabsaday.
Maxamed godkii ayuu kasoo cararay wuxuuna u yimi xaaskiisi Khadiija sidii qorshuhu ahaa isagoo is yeelyeeleya iyana waxay u tagatay inaadeerkeed isla markaana ahaa macalinki Maxamed Warqat Bin Nawfal isna wuxuu yiri “waa naamuuskii nebi Muuse u iman jirey o kale” kadibna Khadiija waxay ka markhaati kacday in wuxuu arkay ahaa Malag, wayna aamintay hawshuna sidaasay si habsami leh ugu socotay.
QORMO LA XIRIIRTA: Maxaad ka taqaan taariikh nololeedkii Istarliin Cabdi Caruush?
Warqat Bin Nawfal waxaa la sheegaa isagoo boqol jir indhool ah inuu dhintay lamana hayo meel uu ku muslimay ama ku qaatay Diintii u aasaaskeeda lahaa, Maxamedse wuxuu sheegay inuu jannada ku arkay geeridiisa kadibna Waxyigii wuu kala go’ay ileen isagaa soo sheegi jirey soona alifi jiraye, sida xadiithka dheer ee Bukhaariga ku jiraa soo warinayo taas oo murugo wayn ku beertay Maxamed kuna khasabtay inuu buuraha fuulo oo isku dayo inuu iska tuuro naftana iska qaado 2.
hawshii waxa isla halki kasii wadey geeridii Warqat Bin Nawfal kadib baadeerigii Buxayraa ee saaxibkii ahaa, dhowr jeer buuna nebiga u yimi isago dameer saaran nebiguna wuxu dadkii ugu sheegay inuu yahay malag Jibriil.
Suuradda Axzaab: 50
Saxiixul Bukhaari – 6581
Abbysinia Buxayra Gebre Meskel Makka Waraqa Bin Nawfal
Qaybta: Diin dhaqameed, Diinta Hinduuska
Diimaha Buddhism-ka, Hinduuga iyo Sikha waxa ay ka simanyihiin aragtida ah in qofku si meerta ah usoo maro dhawr dhalasho iyo nolol kala duwan. Dhalashooyinka kala duwan ee uu qofku soo maro waa kuwo ka baxsan wacyiga iyo garashada qofka. In kastoo laga yaabo in qaarkiin ku qoslayaan aaminaadda noocaasi ah ee aanan la caddayn karin, haddana waa arin ku qoran buugtooda iyo aayaadkooda barakaysan...
Qaybta: Falsafad, Sooyaal, Suufiya
Ereyga ”suufi” maqalkiisu dhegaha soomaalida kuma uu cusba, hase ahaato ee inta og waxa ay suufinimadu tahay aad ayey u yar yihiin, oo waa erey la maqlo oo aan la aqoon.Saddex qaybood ayey dadka soomaalida ahi u badan yihiin marka laga eego aragtiyaha ku saabsan suufinimada. Qaybta ugu badani waa dad aan waxba isweydiin oo suufinimada wixii looga sheego ku qanca ayaga oo aan dareemi karin in la...
W/Q: Cawil Cabdille
Taariikhda Imbaraadooriyaddii Roomaanku waa mid aadan marna ka xiiso beeli karin. Waa taariikh kayn ah oo aad wax walba ugu tagayso. Wakhti boqol sano ka yar ayay sagaal iyo laabatan boqor yeelatay. 29-kaas afar ka mid ah keliya ayaa si caadi ah u dhimatay, inta kale waa qaar la sumeeyay, qaar la daldalay, qaar la waayay iyo qaar naftooda la baxsaday. Laga geyoon maayo in la ga sheekeeyo...
W/Q: Khaled Hassan 28th March 2018
Abuu Hurayra iyo Mucaawiya